AbakwaSamsung bethula i-Galaxy Tab S5e, ithebhulethi eguquguqukayo nenhle kakhulu emakethe ye-Android | Izindaba zamagajethi
Imakethe yamathebhulethi e-Android cishe ikhawulelwe kwimikhiqizo eyethulwa yinkampani yaseKorea emakethe, ngoba bonke abanye abakhiqizi abaze basinikeze amamodeli nalabo abanikezayo, banezinzuzo ezinhle impela kunciphisa ukusetshenziswa esingakunikeza ukubuka amakhasi e-web, ukufunda imeyili nokunye okunye.
Uma sifuna ukudla okuqukethwe kwe-multimedia futhi sidlale omunye umdlalo onamandla, inketho yekhwalithi kuphela emakethe inikezwa yi-Samsung. AbakwaSamsung basanda kwethula ithebhulethi entsha, i-Galaxy Tab S5e, ithebhulethi eyenzelwe ukunikela ngesipiliyoni esihle kakhulu sokuzijabulisa nokuxhuma. Lapha sikukhombisa yonke imininingwane.
1 Umklamo we-Galaxy Tab S5e
2 Ubuhlakani obakhelwe ngaphakathi kubonga uBixby
3 Izici zeCinema
4 Imininingwane ye-Galaxy Tab S5e
5 Intengo nokutholakala kwe-Galaxy Tab S5e
Umklamo we-Galaxy Tab S5e
IGalaxy Tab S5e entsha ayiveli ngokusebenza kwayo kuphela, kepha futhi ayilahli ukwakhiwa nganoma yisiphi isikhathi. I-Tab S5e isinikeza a Umzimba wensimbi ojiyile ongu-5,5 mm kanye no-400 grams kuphela wesisindo, okwenza kube ngenye yezinto ezihamba phambili futhi ezithwalayo emakethe. Ngaphezu kwalokho, itholakala ngesiliva, emnyama negolide, ukuze umsebenzisi akwazi ukukhetha imodeli evumelana nalokho abakuthandayo.
Ukuzimela bekulokhu kungenye yezinto ezibaluleke kakhulu kuthebhulethi, futhi iTab S5e ayisidumazi ngalowo mqondo, ngoba ifinyelela ukuzimela kwamahora ayi-14,5, sibonga ukwenziwa okuhle kokusebenza kwayo kokubili lapho upheqa, udlala imidlalo, usebenzisa okuqukethwe ...
Ubuhlakani obakhelwe ngaphakathi kubonga uBixby
Abasizi be-Virtual sebephenduke imindeni eminingi baba omunye womndeni. Le thebhulethi entsha ifaka iBixby 2.0, umsizi we-Samsung esingasebenzisana ngayo hhayi nje ukubuza imibuzo ejwayelekile ngesimo sezulu noma ukuthi simatasa kangakanani, kepha futhi iba isikhungo somsebenzi sokulawula wonke amadivayisi axhunyiwe.
Ngenxa yeBixby, singenza imisebenzi ngokubambisana, njenge vula ithelevishini futhi izibani zifiphaze amandla azo futhi zishintshe zibe umbala ofudumele. Kepha ukuthola okuhle kakhulu, kuye ngokusetshenziswa esifuna ukukwenza, sibonga ikhibhodi yayo (ethengiswa ngokuzimela) singaguqula iTab S5e ibe ikhompyutha sibonga kuSamsung DeX.
ISamsung DeX iyipulatifomu yeselula / yedeskithophu uSimba asibeka kithi, isinikeza amathuba abaningi bethu abake baphupha ngabo esikhathini esedlule nokuthi Iyatholakala nasematheminali aphezulu enkampani anjengeGalaxy S9 ne-Galaxy Note 9.
Uma okunye ukusetshenziswa esizokunika ithebhulethi ukusebenzisa ividiyo ekusakazeni, noma kulandwe ngqo kudivayisi, ngenxa ye Isibonisi se-Super AMOLED, sizokwazi ukukwenza ngesitayela. Isikrini sisinikeza ifayela le- isilinganiso esingu-16: 10 no-10,5 amayintshi Ngamafreyimu ancishisiwe asinikeza umuzwa ocwilisayo esingasoze sawathola kwamanye amaphilisi emakethe.
Uma singenayo isevisi yokusakaza ividiyo, lapho uthenga i-Tab S5e, sizokwazi jabulela i-YouTube Premium mahhala nezinyanga ezingu-4, insizakalo yokusakaza yomculo wevidiyo kanye nevidiyo.
Umsindo ungenye ingxenye ebalulekile okufanele siyicabangele lapho sithenga idivayisi yalolu hlobo futhi i-Galaxy Tab S5e ayishodi ngalokhu. Le modeli isinikeza ikhwalithi yomsindo ephezulu kakhulu ngenxa ye- Izipikha ezi-4 ezifaka ubuchwepheshe besitiriyo obujikeleza ngokuzenzakalela Banikela ngomsindo onamandla ovumelana nendlela ophethe ngayo ithebhulethi.
Ngaphezu kwalokho, iyasinikeza ukuhlanganiswa nobuchwepheshe beDolby Atmos nomsindo wesiginesha we-AKG lokho kusinikeza umsindo ozungezile we-3D. Ukujabulela ikhwalithi yomsindo enikezwa yiTab S5e, abakwaSamsung basinikeza okubhaliselwe kwe-premium kwamahhala ku-Spotify izinyanga ezi-3, iphromoshini engezwa kuleyo enikezwa yi-YouTube ngenkundla yayo yokusakaza ividiyo
Imininingwane ye-Galaxy Tab S5e
Isikrini 10.5 ”WQXGA Super AMOLED esivumela ukuthi sikhiqize kabusha ividiyo ye-UHD 4K ngama-fps angama-60.
Umseshi Iprosesa ye-Octa-core 64-bit (2 × 2.0 GHz & 6 × 1.7 GHz)
Imemori nokugcinwa I-4GB + 64GB noma i-6GB + 128GB - i-microSD efinyelela ku-512GB
Audio Izipika ezingama-4 ze-AKG ezinobuchwepheshe beDolby Atmos
Igumbi elikhulu Isixazululo se-13 mpx esingarekhoda ngaso amavidiyo ku-UHD 4K (3840 × 2160) @ 30fps
Ikhamera yangemuva Isixazululo esingu-8 mpx
Izinzwa I-Accelerometer - Inzwa ye-Fingerprint - I-Gyroscope - Inzwa ye-Geomagnetic - Inzwa yeHholo - Inzwa Yokukhanya ye-RGB
Conectividad I-Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac 2.4G + 5GHz - VHT80 MU-MIMO - I-Wi-Fi Direct - i-Bluetooth v5.0
Isisindo I-400 amagremu
Ibhetri I-7.040 mAh ngokusekelwa kokushaja okusheshayo
Isistimu yokusebenza I-Android Pie 9.0
Izesekeli Ikhava yencwadi yekhibhodi - Isisekelo sokushaja se-POGO - ikhava elula
Intengo nokutholakala kwe-Galaxy Tab S5e
Okusha ISamsung Galaxy Tab S5e izongena emakethe ngo-Ephreli, kodwa okwamanje, amanani emodeli eyisisekelo ene-4 GB ye-RAM ne-64 GB yokugcina ayimenyezelwe. Lapho nje sezimenyezelwe sizokwazisa ngokushesha.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba zamagajethi » I-Telephony » Tablets » AbakwaSamsung bethula i-Galaxy Tab S5e, ithebhulethi eguquguqukayo nenhle kakhulu emakethe ye-Android